Rugby: hiara-dalana ny lalaon’ny Makis sy ny “Amboaran’ny filoha” | NewsMada
Rugby: hiara-dalana ny lalaon’ny Makis sy ny “Amboaran’ny filoha”
Hanamarika ny famaranana ny taom-pilalaovana 2018, ho an’ny Malagasy rugby, ny lalao lehibe roa. Eo ny fihaonan’ny Makis amin’ny ekipa iray avy any Angletera sy ny fiadiana ny “Amboaran’ny filoha”.
Hotanterahina, etsy amin’ny kianjaben’i Mahamasina ny alahady 16 septambra 2018, ny famaranana ny fiadiana ny “Amboaran’ny filoha”, taranja rugby. Noho ny fisian’ny lalaon’ny Barea de Madagascar sy ny Lionan’ny Teranga avy any Sénégal, voatery nahemotra izany fihaonana izany, na efa voalahatra ho tany amin’ny faha-13 aogositra aza. Nanaja ireo fandaminana rehetra, araka izany, ny Malagasy rugby.
Nambaran-dRakotomalala Marcel, filohan’ny Malagasy rugby, fa ny filoham-pirenena no hanome ny amboara sy ny lelavola ho an’ny ekipa mpandresy. Nohamafisiny fa tsy tokony hafangaro ny resaka politika sy ny fanatanjahantena.
Hihaona ny FTM sy ny STM
Raha tsiahivina, hiady izany famaranana izany ny FTM Manjakaray sy ny STM (Savony). Hifandona eo amin’ny laharana fahatelo kosa ny Cosfa sy ny FTBA Andohatapenaka.
Ankoatra izay, handray lalao iraisam-pirenena ihany koa ny Malagasy rugby, amin’io fotoana io. Hifandona amin’ny Makis de Madagascar mantsy ny université Oxford avy any Angletera. Ekipa mitovy lenta amin’ny “Pro D2” na ny “semi-pro”, anisan’ny klioba matanjaka any Angletera, izy ireto. Araka ny fantatra, ho tonga ny alakamisy 13 septambra ry zareo. Tafiditra aminy “Get into rugby club” io lalao io. Marihina fa mbola hisy lalao miverina hikatrohan’ny roa tonta, ny 23 septambra ho avy izao.
Aorian’ny fahavitan’ny lalaon’ny université Oxford io, hiditra amin’ny fifaninanam-pirenena, sokajy “elite federale”, ny Malagasy rugby. Hatao ny 14 sy ny 15 okotobra kosa ny fifanintsanana “Can” sy ny “Lalao olympika” (JO 2020).